Archive du 20161107
Didier Ratsiraka Nanao antso avo ho an�ny Dahalo
Nosafidian�i Didier Ratsiraka manokana hankalazana ny faha-80 taona nahaterahany ny tan�nan�i Fianarantsoa ny sabotsy 5 novambra lasa teo.
Fahasahiranan�ny firenena Mila mahay miaiky heloka ny mpitondra
Notakian�ny vahoaka any Korea Atsimo ny fametraham-pialan�ny filohany Rtoa Park Geun-hye noho ny resaka tsy fahaiza-mitantana ny firenena.
Aleo mifandamina e !
Mba hampita hafatra sy hananatra kely fa ohatran�ny efa mivaona mihitsy isika ry Jean ! Ekena fa tsy mahavita ny asany ry bebaoty sy ry be kolikoly saingy aleo mitady vahaolana hafa e !
Mpikarakara ny fivorian�ny Comesa Sahy nandainga tsotra izao
Hatramin�izao dia mbola mifandrirarira hatrany ny avy eo anivon�ny sampandraharaha nisahana ny fifandraisana na ny DRM tamin�ny fihaonamben�ny Comesa izay natao teto amintsika farany teo sy ny avy eo anivon�ny minisiteran�ny raharaham-bahiny izay tompon�andraikitra voalohany amin�ny fikarakarana fihaonambe iraisam-pirenena tahaka itony.
Filohan�ny TAMAMI Hifaninana ho lehiben�ny mpanohitra
Anisan�ny raharaha mitana ny sain�ny maro eto amin�ny firenena indray tato ho ato ny fanomezana toerana ny mpanohitra eo anivon�ireo andrim-panjakana roa mijoro, indrindra taorian�ny nanambaran�ny filohan�ny antoko Malagasy Miara Miainga ny maha mpanohitra azy ireo.
Fanohanana ny maha olona Sekoly roa nahazo fanampiana tany Antsiranana
Sekoly Kristianina roa, dia ny sekoly �Soeur des filles de la charit� du sacre c�ur de J�sus� sy ny ivontoeram-piofanana arak�asa �S�ur Ursulines�
Mpianatra Malagasy tany Sina Nody maina tsy nahazo diplaoma
Ela ny ela fa misy eto amintsika ankehitriny ireo mpianatra nandranto fianarana tany ivelany, nody maina tsy nahazo diplaoma.
Mpianatry ny EPP Mahavelona Notoloran�ny Airtel fitaovam-pianarana
Tsy nanadino ireo mpianatra manovo fahalalana eny anivon�ireo sekoly ahiany mivantana ny orinasam-pifandraisana Airtel amin�izao fiandohan�ny taom-pianarana 2015-2016 izao.